पृथ्वीले सूर्यलाई घुम्छ भनी गणितीय व्याख्या गर्ने पहिलो वैज्ञानिक कोपर्निकस - पब्लिक पाेष्ट
June 29, 2019 July 4, 2019 EP EDITORLeaveaComment on पृथ्वीले सूर्यलाई घुम्छ भनी गणितीय व्याख्या गर्ने पहिलो वैज्ञानिक कोपर्निकस
घाम पूर्वबाट उदाउँछ, पश्चिममा अस्ताउँछ । चन्द्रमा पनि पूर्वबाटै उदाउँछ र पश्चिममा अस्ताउँछ । हेर्दा र सोच्दा यस्तो लाग्छ– पृथ्वी एउटा ठाउँमा अडेको छ, घाम र चन्द्रमाले पृथ्वीलाई घुम्ने गर्छ । वास्तवमा यो सत्य होइन भन्ने कुरा अहिले सामान्य पढेलेखेको सबैलाई थाहा छ । सबैले जानेको, बुझेको र मानेको सत्य के हो भने, घामले पृथ्वीलाई हैन, पृथ्वीले चाहिँ घामलाई घुम्छ । बरु चन्द्रमाले चाहिँ पृथ्वीलाई नै घुम्ने गर्छ
ग्याष्ट्रिक के हो, किन हुन्छ ग्याष्ट्रिक, यदि ग्याष्ट्रिक भइहालेमा के खाने ? जानकारी लिनुहोस् !
‘सानो मन’ को शिर्ष गीत उत्कृष्ट गाउने एक जनालाई गीत रेकर्ड गर्ने मौका
फेसबुकको ३ महिनाको कमाई साढे १३ अर्ब डलर
November 6, 2018 EP EDITOR